Ururka Ahlu-sanna oo taageeray mawqifka Farmaayo, gaashaankana u daruuray qodobaddii Kampla. – Radio Daljir
Ururka Ahlu-sanna oo taageeray mawqifka Farmaayo, gaashaankana u daruuray qodobaddii Kampla.
Juunyo 14, 2011 12:00 b 0
Dhuuso-marreeb, June 14- Shir ay iskugu yimaadeen maamullada degmooyin uu ka arrimiyaan ururka Ahlu-sunna waljameeca ee gobollada Galgaduud iyo Hiiraan ayaa lagu taageeray mawqifka iyo wax-qabadka xukuumadda R/wasaare Maxamed C/llaahi Farmaayo.
Shirkaan oo soconayey muddo labo maalmood kana dhacay magaalada Dhuubo-marreeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey mawqifka R/wassaraha Soomaaliya iyo xukuumaddiisu ay ka taagan yihiin nuxurkii ka soo baxay shirkii magaalada Kampla ee waddanka Yagaandha, waxaana ay sheegeen in la dhawro sharciga iyo axdiga waddanka u yaalla lagana gudbo rabitaanka shaqsiyadeed.
Madaxda Ahlu-sunna ee shirkaasi ka qayb-galay ayaa waxaan la iska indhatiri-karin ku tilmaamay tallaabooyinkii wax-qabad ee xukuumadda Farmaayo ay ku dhaqaaqday muddadii koobnayd ee ay shaqaynaysay, iyagoo dhinaca kalena dhaliilay hanka iyo damaca labada shariif.
Shirkaan ayaa gaba-gabadii go?aamo laga soo saaray waxaa ugu miisaan-cuslaa in aan la dhanyalsan rabitaanka umadda Soomaaliyeed iyadoo laga duulayo bannanbaxyada joogsan waayey ee magaalada Muqdisho ee lagu diidan yahay nuxurkii Kampla gaar ahaanna shaqo katagidda R/wasaaraha taasoo ay tilmaameen in ay ka turjumayso xaqiiqada iyo rabitaanka ummadda Soomaaliyeed.
Safaaradda Soomaalida ee Hindiya oo bandhigtay qaar ka mid ah magacyada maxaabiis loo haysto burcadnimo oo ku xiran dalka Hindiya.
Ciidanka bileyska ee gobolka Bari oo hawlgal dad lagu soo xirxiray ka fuliyey magaalada Bosaaso.